နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > မည်သို့ရန်ခရီးသွား Eco Friendly ခုနှစ်တွင် 2020?
အတော်များများကခရီးသွားများအတွက်လျော့နည်းပျံဖြင့်သို့မဟုတ်လုံးဝလေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုကိုထုတ်လုပ်ကြံသောအားဖြင့်မိမိတို့၏ကာဗွန်ခြေရာကိုလျှော့ချဖို့ရှေးခယျြ, အများစုဆှီဒငျ buzzword တုံ့ပြန် လေယာဉ်ခရီးစဉ်ရှကျရှံ့ခွငျး (လေယာဉ်ခရီးစဉ်အရှက်ကွဲခြင်း). ယခုအချိန်တွင်လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ. ပျံအမြဲကျနော်တို့ခရီးသွားဖို့ရွေးချယ်ပုံကိုတစ်ဦးအရေးပါသောကစားသမားဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, ကျနော်တို့ခရီးသွားကမ်းလှမ်းမှုကိုစိတ်လှုပ်ရှား၏အခြားပုံစံများကိုသတိပေးခံရဖို့လိုအပ် Eco အားလပ်ရက်.
မီးရထားခရီးသွားလာ ကျေးဇူးတရား ambiance bygone တစ်လွမ်းဆွတ်ရှိပြီးတစ်ဦးသည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့် Eco-friendly ခရီးသွား ပဏာမခြေလှမ်း. ဒါဟာပိုပြီး legroom အပါအဝင်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း, လှပတဲ့ရှုခင်းခံစားနေစဉ်ထမင်းစားခန်းကားထဲတွင်ညစာစား, ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွား ဝေးပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ချိတ်ဆက်နေဖို့လိုသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်, In-flight mode မရှိဘူး. မီးရထားခရီးသွားလာရန်ပြတ်ပြတ်သားသားနှိုင်းယှဉ်ထားသည် တာဝန်ရှိခရီးသွား.
ဒေသခံများအားထောက်ပံ့ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ Eco ဖော်ရွေခရီးသွား ပဏာမဒါပေမယ့်လည်းအသိုင်းအဝိုင်းထင်ရှားသောအလှူငွေဖြစ်ပါသည်. ဒေသအလိုက်ဝယ်ယူဘယ်သူမှသူတို့အားကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုလိုသည်. ပို. ပင်, ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှင်သန်ရန်အခွင့်အလမ်းများ. ၎င်းသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဒေသခံပြည်သူများအနိုင်ရရှိသည်.
တစ်ဦးကဦးတည်ရာကိုမျုိးတို့အားလက်ကကမ်းလှမ်းမှုဖို့ရှိပါတယ်သမျှသောသူတို့အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုဗတ္တိဇံဖို့ခရီးသွား. အမှန်တကယ်က၎င်း၏လူတို့နှင့်အတူ interactive ရန်မပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်, ၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစား, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်၌ပျော်မွေ့. အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူပြီးတစ်ပင်ပိုကောင်းတယ့်နှင့်လမ်းလျှောက်မ.
သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ခရီးသွား အဆိုပါခရီးသွားကိရိယာအစုံမှာကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦး Eco ဖော်ရွေခရီးသွားကိရိယာအစုံတစ်ဝါးသွားတိုက်တံများဖြစ်နိုင်သည်ထားရှိရေးဦးမည်, ခေါင်းလျှော်ရည်အရက်ဆိုင်, နှင့်ရေချိုးခန်းဂျယ်လ်အစားဆပ်ပြာဘား. သေးသေးလေးခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်အေးစက်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဖိတ်စင်များ. Aluminum water bottles are vital as well as metal straw.
များအတွက်အကြီးမားဆုံးခရီးသွားခေတ်ရေစီးကြောင်း 2020 အတွေ့အကြုံခရီးသွားခရီးသွားနိုင်ရန်နည်းလမ်းသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာညွှန်ပြ. ကျော်ရွှေ့, ကဂန္ထဝင်ဖြစ်ပါတယ်. အတွေ့အကြုံများအဘို့ဤကြောင့်အခန်းထဲမှာကြောင်းဟန်ပြယဉ်ကျေးမှု, လှုပ်ရှားမှုများ, နှင့်နေရာများသို့ထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု.
ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုစိုက်ကျနော်တို့နယ်လှည့်များ၏အနုပညာကိုချစ်ပါလျှင်, ကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်, ကာကွယ်သည်, ငါတို့ခရီးသွားခြင်းကကမ္ဘာဂြိုဟ်၏စုပေါင်းအကျိုးအတွက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေသည် Eco ခရီးသွားလုပ်ငန်း. အတူရထားခရီးစဉ်ကို booking အားဖြင့် Start တစ်ဦးကရထား Save, ယနေ့တွင်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “မည်သို့ရန်ခရီးသွား Eco Friendly ခုနှစ်တွင် 2020?” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)